निद्रा नलागेर राति छटपटी भयो ? सुत्नुअघि श’रीरको यो भाग दबाउनुहो’स् - Babal Khabar
निद्रा नलागेर राति छटपटी भयो ? सुत्नुअघि श’रीरको यो भाग दबाउनुहो’स्
October 18, 2021 October 18, 2021 by बबाल खबर
पहिले यो भिडियो हेर्नुस,
धेरैलाई राति अबेरसम्म निन्द्रा लाग्दैन। निद्रा बोलाउनका लागि केही मान्छे घन्टौंसम्म ओछ्यानमा यता र उता पल्टिन्छन्।
‘लौन, कुनै जादू मन्त्र पाएदेखि फुस्स निदाउँथें नि’ भनेर कल्पन्छन् यस्ता मान्छे।यस्ता मान्छेका लागि एउटा जादू उपाय आएको छ ।
यो हो एक्युप्रेसर र यसले अ’निद्रा लगायत शरीरका धेरै सम’स्या समाधान गर्छ ।
तपाईंले शरीरका विशेष भागमा दबाब दिनुभयो भने शिशुले जस्तो सुत्न सक्नुहन्छ ।आरामले सुत्नका लागि तपाईंले शरीरका तीन विन्दुमा दबाब दिनु जरूरी हुन्छ। गोडाको बुढी औंला र दोस्रो औंलाबीचको माथिल्लो भाग। सुत्नुअघि यहाँ चारदेखि पाँच सेकेन्डसम्म थिच्नुस् ।
कुन अंग द’बाउँदा के हुन्छ ?
नाडीबाट तीन औंलाको दूरी माथि रहेको भाग । यहाँ पाँच मिनेटसम्म द’बाब दिनुभयो भने सुत्न सजिलो हुन्छ। पाइतालाको मध्यभाग। यहाँ चाहिँ पहिला ३० सेकेन्ड दबाब दिनुस्, त्यसपछि पाँच सेकेन्ड छोड्नुस् अनि फेरि ३० सेकेन्ड दबाब दिनुस्।धेरैजसो मान्छेलाई जतिखेर पनि कुनै न कुनै समस्या वा पीडाले सताइरहेको हुन्छ।
कहिले टाउको दुख्छ, कहिले त’नाव हुन्छ। यस्तोमा मान्छेले महंगा औषधि किनेर खान्छन् तर खासै फाइदा भने भइरहेको हुँदैन।तर शरीरका केही विन्दुमा केही सेकेन्ड थिच्दा स्वास्थ्यका अनेकथरी समस्या समा’धान हुन्छ भन्ने तपाईंलाई थाहा छ ? यहाँ हामी हातका केही यस्ता विन्दुहरूका बारेमा बताउँदैछौं जसलाई केहीबेर थिच्दा तपाईं कुनै पनि पी’डाबाट मु’क्त हुन सक्नुहुन्छ ।
त’नाव तपाईं प्रायः तनावमा हुनुहुन्छ भने औषधिको सहारा नलिनुसे । हातको कान्छी औंलामुनिको नाडीमा हलुका दबाब दिनुस् । केही समय यसरी द’बाब दिँदा त’नाव हट्छ । अपच र चि’न्ता हत्केलाभन्दा लगभग तीन सेन्टीमिटर तलको भागलाई दबाउँदा अपच र चि’न्ता जस्ता स्वास्थ्य स’म्बन्धी स’मस्या हट्छन् ।
बाडुली अचानक बाडुली लाग्यो र रोकिएन भने हत्केलाको ‘बीच भागमा थिच्नुस् । बिस्तारै बा’डुली हट्छ ।
गर्दनको पी’डा गर्दनमा ती’व्र पी’डा भएमा चोरी औंला र माझी औंलाबीचको भागमा दबाउँदा पी’डा शमन हुन्छ ।
दाँतको पी’डा दाँतको पी’डा हुँदा बूढी औंलाको चारैतर्फ द’बाब बनाउनुस् । यसबाट पी’डा शा’न्त हुन्छ ।
पे’टको स’मस्या ग्या’स भरिने र पेट दु’ख्ने स’मस्या हुँदा पनि हत्केलाको बीच भागमा दबा’उँदा सम’स्या सुल्झिन्छ। यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevश्रीमानलाई खुसी बनाउने यस्ता १० टिप्स् !
nextविदेशमा श्रीमान हुनेका श्रीमतिहरुले एक पटक अ’वस्य पढ्नुहोला !